I-China Enempilo Eyomile I-Marigold Flower Tea Ukukhiqizwa Kwefektri | Bestop
Igama lesiShayina: jin zhan hua
Igama lesiNgisi: pot marigold
Igama lesiLatin: Calendula officinalisL.
Sebenzisa Ingxenye: flower
Umsebenzi oyinhloko: Ukulawula i-qi, ukuqeda ukudangala, ukuxazulula i-phlegm, ukuqeda ukoma, ukudla nokuqabula
I-Calendula officinalis L., imbiza yeminyaka emibili yeCompositae, inoboya. Ishiya enye, indilinga. Izimbali ziphuzi noma ziwolintshi. Isikhathi sokuqhakaza siqala ngo-Ephreli kuya kuSepthemba kanti isikhathi sezithelo sivela ngoJuni kuya ku-Okthoba. Thanda ukukhula esimweni esipholile, esipholile, esaba ukushisa, amakhaza. Ivela eningizimu yeYurophu nasogwini lwaseMedithera. I-Calendula icebile ngamavithamini, ikakhulukazi uvithamini A novithamini C, okungavimbela ukubola, kuthuthukise ukucwebezela kwesikhumba nokuqina, kunciphise ukuguga, futhi kugweme ukuphumula kwesikhumba kanye nemibimbi  Cishe zonke izingxenye zingadliwa; Amacembe anomsebenzi wobuhle. Amacembe aqukethe i-carotenoids, i-lycopene, i-chrysanthin, uwoyela oguquguqukayo, i-resin, i-myxoid, i-malic acid, njll. Impande iqukethe into ebabayo ne-kaempferol; Imbewu iqukethe ama-glycerides, ama-waox alcohol kanye nama-alkaloids. Yifake ku-shampoo ukukhanyisa izinwele zakho. AbaseGibhithe lasendulo babekholelwa ukuthi i-marigold ingakubambezela ukuguga, kanti amaNdiya ayihlonipha njengembali engcwele. Eminyakeni ephakathi, i-marigold yayisetshenziselwa ukwelapha abalimele kanye nokulwa nesifo nokufa kwabantu abamnyama.
UMarigold ungenye yezimbali ezivame kakhulu ze-herbaceous ekuqaleni kwezingadi zasentwasahlobo nasemadolobheni. ENtshonalanga yasendulo, ingasetshenziswa njengomuthi noma udayi, futhi njengezinto zokugcoba noma ukudla. Amaqabunga awo namacembe angadliwa, ngakho-ke kungasetshenziswa njengomhlobiso wezitsha.
Imithi elwa namagciwane, anti-inflammatory, hypolipidemic, immunostimulatory and sedative effects
Izithelo ze-Calendula zicebile ku-vitamin A, ongavimbela ukubala kwesikhumba, kuthuthukise ukucwebezela kwesikhumba nokunwebeka, wehlise ukuguga, futhi ugweme ukuphumula kwesikhumba nemibimbi. Kungavimbela nezifo eziphucuzekile, njengezifo zemithambo yegazi kanye nomdlavuza, kulawule i-qi nokuqeda ukukhwehlela, kuqinise isisu, kususe i-phlegm, kuvimbele i-asthma ne-bronchitis. I-Kumquat iqukethe no-vitamin P, okuyisakhamzimba esibalulekile sokugcina impilo yemithambo yegazi. Ingaqinisa ukuqina kwe-microvessels, futhi ingasetshenziswa njengokudla okusizayo kwabahlengikazi komfutho wegazi ophezulu, i-arteriosclerosis nesifo senhliziyo.
I-Calendula ilungele i-bubble eyodwa, noma itiye eliluhlaza. Phisa ngethisipuni lamacembe omisiwe e-Calendula bese ubila imizuzu engaba ngu-3-5. Itiye legolide lisusa amacembe egolide antantayo futhi linephunga elibucayi. Inambitheka kamnandi futhi ibabayo kancane, futhi inganothiswa ngoju. Uma unomkhuhlane, ukuphuza itiye le-Calendula kuzosiza ekwehliseni umkhuhlane, kuphole futhi kunciphise umlilo. Futhi kunomphumela wokususa i-spasm nokukhuthaza ukugaya, okulungele kakhulu iziguli ezine-peptic ulcer. Ngaphezu kwalokho, ingakhuthaza ukujikeleza kwegazi. Kunganciphisa nokuphuza ngokweqile, ngakho-ke kuyasiza nasesibindi. Kodwa abesifazane abakhulelwe akufanele baphuze itiye le-marigold.
Ukusetshenziswa kanye nomthamo: 1.8-4.5g
Ukuphathwa ngomlomo: i-decoction, i-10-20g; Bilisa ukhilimu, cwilisa iwayini noma iphilisi, impuphu. Ukusetshenziswa kwangaphandle: inani elifanele, i-decoct, i-wash, i-grind, i-sprinkle noma i-spread.
I-Polygonum multiflorum ilungele ukondla igazi ne-Yin; Kufanelekile ukusebenzisa i-Polygonum multiflorum eluhlaza okomisa amathumbu nokuhlanza, ukukhipha umoya, ukunqanda umalaleveva nokuqeda ubuthi emzimbeni.
Gubha ekwindla, susa izimpande ezinemicu, ugeze, wome kuze kuthambe, uxove kaninginingi, wome umoya kuze kungabikho umnyombo oqinile, futhi womile; noma ngemuva kokubhaka, xova uze uguquke, bese womile
Susa ukungcola, ugeze, uthambisa, uthathe izingcezu noma izingxenye ezijiyile, bese womile.
Langaphambilini I-Wholesale Flower Tea Khohlwa-Mina-Hhayi
Olandelayo: I-Flower Tea URose Bud
I-Butterfly Pea Flower Itiye
Itiye lembali likaMarigold elomile
Izimbali Zetiye Engamakhambi
I-Rose Flower Tea